iPad Mini5သုံးဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဘာဖြစ်မလဲ (Review)
Screen size ကြီးတဲ့ Smartphone တွေ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လာကြတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Tablet တွေခေတ်ကုန်ပြီလို့ တစ်ချို့က ထင်ကြ၊ ပြောကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲ ကိုယ်တွေတော့ မပါခဲ့။
ကိုယ်တွေယုံကြည်တာက Tablet တွေဟာ ခုထက်ပိုမြင့်တဲ့ level တစ််ခု၊ ပိုပြီးတိကျအောင်ပြောရရင် Ultrabook တွေလို Productivity Device တွေနေရာကို ရောက်လာဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေပြီဆိုတာပဲ။ အထူးသဖြင့် Apple ရဲ့ iPad တွေပေါ့။
အစက ကိုယ်တွေစိတ်ကူးတာ Laptop လဲဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အသိတစ်ယောက် iPad Mini ဝယ်တော့ အဆိုးအကောင်းမေးမြန်းတိုင်ပင်မိရာကနေ လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်ချက်ကြားက ကိုယ့်အတွက် အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် ဒီကောင်လေးကို Laptop တို့ Smartphone အသစ်တို့လဲမယ့် Plan ကို ကျော်ပြီး ရွေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောရမှာပဲ။
အရင်ဆုံး Laptop တစ်လုံးပေါ် နေ့တိုင်းအဖြစ်နဲ့ ဘာတွေသုံးဖြစ်မလဲ စစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကိုယ်တွေက IDM (Internet Download Manager) အသုံးများတယ်။ နောက်ပြီး File Storage & Transfer လုပ်တယ်။
Microsoft Word အသုံးများတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းကို ROM Change တာဘာညာမှာ သုံးဖြစ်တယ်။ လိုချင်တာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ရလွယ်မယ့် Ultrabook လိုမျိုး။
PC ပေါ်မှာ ဂိမ်းမဆော့တာကြာပြီဆိုပေမယ့် တကယ်လို့များ Video Editing လို Powerful ဖြစ်တဲ့ Task တွေလုပ်လာခဲ့ရရင် Future-proof ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်သလို စျေးအားဖြင့်လည်း ၁၅ သိန်းဝန်းကျင်ထိ ရောက််သွားနိုင်ခြေ ရှိနေပြန်ရော။
တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း Apple Arcade က ကိုယ်တွေကိုစမ်းကြည့်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေနိုင်ပြန်တယ်။ အရင်က iPhone ကို Android Tablet နဲ့ တွဲသုံးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ဖူးပေမယ့် Android Tablet တွေပေါ်က Productivity လုပ်နိုင်စွမ်းကို အားမရလို့ မသုံးဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။
Phone Crazy တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် Mi9သုံးတာ ၁ နှစ်ကျော်လာတော့ ဖုန််းအသစ်လဲကိုင်ချင်စိတ် အာသီသဖြစ်မိပေမယ့် ဖုန််းအသစ််လဲရင် ငါဘာအကျိုးပိုရှိမလဲ။ ပိုကောင်းတဲ့ Specification တွေရလာတာမှန်ပေမယ့် အဲဒီဖုန်းကို Laptop လို သုံးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မရပြန်။
ဒါကြောင့် iPad က ကိုယ်တွေရဲ့ Need & Want နှစ်ဖက်စလုံးကို အနီးစပ်ဆုံး ဖြည့််ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒါဆို Mini5ကိုမှ ဘာလို့ရွေးလဲ? အဖြေကို အောက်မှာဆက်ပြောမယ့် P ၄လုံးထဲမှာ ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။
P2P ကြည့်ရတဲ့ ကိုယ်တွေလို လူမျိုးအတွက်် Price က အရေးကြီးတယ်။ (ပေါများမနေဘူးလေ) လက်ရှိ ဒီက Mini5ရဲ့ Official ပေါက်စျေးက 64GB, WiFi ကို ၇ သိန်းအထက်မှာရှိတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ COVID မဖြစ်ခင် China to Myanmar အဝယ်တော် ကနေ စျေးတန်တန်ရလိုက်တယ် ပြောရမယ်။
ခုနေ လမ်းကြောင်းပွင့်လို့ မှာခဲ့ရင်လည်း ဒီကထက်တော့ ပိုသက်သာဦးမှာပါ။ (ဘယ်လောက်သက်သာမလဲဆိုတာတော့ Page မှာ ကိုယ်တိုင်သွားမေးကြပါကုန််) ဒီစျေးမှာ ဒီလို Form & Factor တွေ Laptop မှာရဖို့ မျှော်လင့်နိုင်မယ်မထင်။
အစက Air3ဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့သေးပေမယ့် ဒီကောင့်ထက် ၁ သိန်းကျော်လောက် စျေးပိုများတာရယ်၊ အောက်မှာဆက်ပြောမယ့် အချက်ရယ်ကြောင့်် iPad Mini5ကို ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရမှာပါ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ကိုယ်တွေက ပေါ့ပါးပြီး သယ်ရလွယ်တာ သဘောကျတတ်တဲ့သူ။ ဒီအတွက် Mini5ရဲ့ Size က သဘောကျစရာဖြစ်နေခဲ့တယ်။
လွယ်နေကျ လွယ်အိတ်အသေးမှာတောင် ဒီကောင်လေးရဲ့နေရာယူမှုက ကျောင်းစာအုပ် တစ်အုပ်စာထက် Size ပိုသေးပါတယ်။ Unboxing လုပ်ခါစက Air3မယူမိတာ မှားပြီလားဆိုပြီး အတွေးဝင်ခဲ့ပေမယ့် Cover တပ်ပြီး စသုံးချိန်မှာတော့ Mini5က ကိုယ့်အတွက်ပိုသင့်တော်နေလို့ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။
Cover ဆိုမှ ရှေ့မျက်နှာပြင်ပဲလုံတဲ့ Apple ရဲ့ Original Magnetic Cover အစား စျေးလည်းပိုသက်သာပြီး ရှေ့ရောနောက်ပါလုံတဲ့ Magnetic Cover အပျော့ပဲ တပ်သုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
(Cover ကို စိတ်ကြိုက််အရောင်ရအောင် ရှာပေးခဲ့တဲ့ အဝယ်တော် စိုင်းသံလွင်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ) ဒီအတိုင်းကိုင်ရင်တော့ Tablet က ပေါ့ပေမယ့် Cover ရဲ့ ဝိတ် ပါလာတဲ့အခါ ကိုင်ရတာ စကားပြောလာတယ််။
ကိုယ်တွေက သတင်းတွေ၊ Manga တွေအဖတ်များတဲ့သူဆိုတော့ Tablet ကို အိပ်ရာအစ၊ အိမ်သာအဆုံး ယူသွားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ တကယ်လို့သာ iPad Air3ဝယ်ခဲ့ရင် One-handed usage နဲ့ အိပ်ရင်းစာဖတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့အလေးချိန်က ကိုယ်တွေအတွက် ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချို့က Mini5ရဲ့ 7.9” Display ကို သေးမှာစိုးရိမ်ပြီး အကြီးပဲဝယ်ဖို့ အားပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေအတွက်တော့ သူ့ Display Size က လုံးဝလုံလောက်မှုရှိတယ်။ 8” ဆိုပေမယ့် 3:2 Ratio ကြောင့် လက်တွေ့ Size က 6.5” Smartphone ၂ လုံးကို ဘေးချင်းကပ်ထားတဲ့ Size လောက်ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ တစ်နေရာထဲမှာ အငြိမ်ထိုင်တာများပြီး Size ကြီးတာ လိုချင်ရင်တော့ Air3ကိုရွေးပါ။ Mini5ကိုတော့ Handheld usage အတွက် အဆင်အပြေဆုံးလို့ ဆိုချင်တယ်။
Tablet တစ်လုံးကို ရွေးဖို့စဉ်းစားတာဟာ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ Media Consumption လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ ပုံဆွဲဖို့ဆိုပြီး Tablet ကိုရွေးတဲ့သူတွေ ရှိမယ်။ တစ်ချို့က ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်နိုင်၊ Notes ထုတ်နိုင်၊ စာအုပ်တွေ တစ်နေရာထဲမှာ သိမ်းနိုင်ဖို့ ရွေးကြမယ်။
အဲဒီလူတွေအတွက်တော့ iPad နဲ့အတူ Apple Pencil ကို မဖြစ်မနေရွေးရမှာပါ။ 1st Gen Apple Pencil က iPad Mini ပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေက စာအရေးများတဲ့သူမို့ iPad ဝယ်ရင်း Keyboard ပါ တစ်ခါထဲ တွဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ သိထားရမှာက Apple ရဲ့ Magnetic Dock ပါတဲ့ Official Keyboard က Mini အတွက် သုံးဖို့အဆင်မပြေဘူး။ ဆိုတော့ ပေါ့ပါးပြီး Compact ဖြစ်တာသဘောကျတဲ့ကိုယ်တွေရွေးခဲ့တာက Artek HB030B ဆိုတဲ့ Keyboard ပေါ့။ ၃သောင်း ၆ထောင် ပေးရတယ်။
သူ့အထူက iPad Mini ထက် ပါးပြီး Size က iPad Air အရွယ်ပဲ ရှိတာပါ။ Plastic Keyboard မို့ သယ်ရအတော်ပေါ့သလို စာရိုက်ရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ သဘောအကျဆုံးက LED Backlight ပါပြီး Solo lighting နဲ့ အရောင် ၇မျိုးကို မီး ၂ဆင့်အထိ တင်နိုင််တာပါ။ အားကလည်း တစ်ခါသွင်းရင် အတော်ခံတယ်။
iOS, Windows, Android ၃မျိုးစလုံးသုံးနိုင်ပြီး Bagan Keyborard နဲ့ဆို မြန်မာဖောင့်ရိုက်ရအဆင်ပြေတယ်။ သူ့မှာထည့်ထားတဲ့ Function Key တွေကလည်း တော်ရုံ Feature တွေကို Touch Screen ထိစရာမလိုပဲ သုံးလို့အဆင်ပြေနေတာလေးလည်း သဘောကျတယ်။
အားနည်းချက်အဖြစ်ပြောစရာဆိုလို့ Bluetooth 3.0 သုံးတာ (Tablet နားပဲ ကပ်သုံးတာဆိုတော့ ဒါက no problem) နဲ့ Micro USB-B နဲ့ အားသွင်းရတာလောက်ပဲရှိတယ်။
Mini5ပေါ်မှာ ကိုယ်တွေထည့်စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ future proof ဖြစ်တဲ့အချက်က Photo & Video Editing ပါ။
ပုံမှန် Edit လောက်အတွက်ဆိုရင် iMovie ကို အားကိုးနိုင်ပြီး လုံးဝ Pro ကျကျသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ Luma Fusion တို့လို App တွေက စျေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် ဆယ်သိန်းအောက် Laptop တစ်လုံးမှာ ဒီအချက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာ မျှော်လင့်နိုင်ဖို့ မလွယ်နိုင်ပါဘူး။ Movie Edit အတွက်တင်မဟုတ််ပါဘူး။
iPad ပေါ်မှာ ပါလာပြီးသား Original App တွေတိုင်းက သုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလောက် အသုံးတည့်သလို External Hard Disk တွေ ဖတ်နိုင်တာ၊ နောက်ဆုံး Update မှာ Mouse ပါ သုံးရအဆင်ပြေလာပြီမို့ Laptop အစားထိုးလုံးဝမဟုတ်တောင် အပ်ချက်အားလုံးနီးပါးဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ Portable Device တစ်ခုကို ၇ သိန်းဝန်းကျင် တန်လွန်းနေပြီိလို့ ကိုယ်တွေတော့ ယူဆတယ်။
(Productivity သီးသန့်မှာ စျေးပိုသက်သာချင်ရင် Magnetic dock support တဲ့ ရိုးရိုး iPad ကို ညွှန်းချင်ပေမယ့် ဒီမှာတော့ ထူးပြီးစျေးသက်သာမယ်မထင်)
iPad Mini5Performance
ဒါကို Category တစ်ခု သီးသန့်ခွဲရေးရခြင်းက Mini5ရဲ့ တခြားဒီစျေးဝန်းကျင် iPad တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အားသာချက်ကို သိသာစေဖို့ပါ။
ပုံမှန် Productivity နဲ့ တော်ရုံဂိမ်းဆော့ဖို့လောက်ဆိုရင်တော့ စျေးနဲနဲပိုသက်သာတဲ့ iPad 2019 က သဘောကျစရာဆိုပေမယ့် ဂိမ်းဆော့ဖို့အသားပေးရွေးချင်တာ၊ ရေရှည် Performance ကို ကြည့်မှာဆိုရင်တော့ Mini5က ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
A12 Bionic ဟာ ထွက်တာ ၁ နှစ်ခွဲလောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ SoC ဆိုပေမယ့် လက်ရှိထွက်ထားသမျှဂိမ်းအားလုံးကို အမြင့်ဆုံး Setting နဲ့ မထစ်မပြုဆော့နိုင်တာက အားရစရာပါ။ Sky လို့ Graphic မြင့်ပြီး လှရက်လွန်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးကို 8” Display မှာ ဆော့ရတဲ့ feel က ဖုန်းပေါ်မှာဆော့ရတာထက် အပုံကြီးပိုသာတယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့ ခံစားမိတယ်။
Battery Life ကြောင့် iPhone တွေကို Gaming အတွက် ရွေးဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ရင် iPad Mini5ကို စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။ High Performance Task တွေကို Run တဲ့အခါမှာတော့ တခြားဖုန်းတွေနည်းတူ သူလည်းပူပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Magnetic Cover ကျေးဇူးကြောင့် နွေးတယ်ဆိုရုံပဲ ကိုယ်တွေတော့ ခံစားရတယ်။ Battery Life အနေနဲ့ Normal Usage မှာဆို Screen Time 8hr အထက်နဲ့ တစ်နေ့တာကို အေးဆေးဖြတ်သန်းနိုင်တယ်။
ဘော်ဒါတွေနဲ့ Mobile Legend ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက် ဂိမ်းဆော့ဖြစ်တဲ့နေ့မှာတောင် Screen Time က 6hr လောက် ရတာ အားရစရာ။ ဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့ချင်လို့ဆိုပြီး iPhone SE မက်မယ့်အစား ဒီကောင်လေးကို ပိုစဉ်းစားစေလို။
IPad OS ပေါ်က User Experience ကို ကိုယ်တွေတော့ iOS ထက် ပိုသဘောကျတယ်။ သူ့ UI က Desktop level လို့ မပြောနိုင်သေးပေမယ့် Desktop Grade Safari နဲ့ Download ပါ ဆွဲနိုင်တာ၊ Photo Gallery မှာ Edit လုပ်နိုင်မယ့် Tools တွေ ပိုပါလာတာ၊ One hand typing အတွက် Keyboard size ချုံ့တာလို အသုံးတည့်မယ့် feature တွေကြောင့် အဆင်ပြေတယ်။
အကြိုက်မိဆုံး Feature ကတော့ Slide over လို့ခေါ်တဲ့ App ၃ခု တစ်ပြိုင်တည်း သုံးနိုင်မယ့် Feature ပါ။
Android မှာလို Messenger pop-up မရတဲ့ iOS အတွက် ဒီ Feature ကို ကိုယ်တွေတော့ ဂိမ်းဆော့ရင်း Messenger နဲ့ Facebook ပြိုင်သုံးနိုင်တော့ ဂိမ်းအပြင်ထွက်ပြီး သုံးနေဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဆိုတော့ iPad Mini5က ကိုယ်တွေကို ဖုန်းပေါ်မှာ ဂိမ်းပြန်ဆော့ကြည့်ရင် အားမလိုအားမရဖြစ်အောင် အကျင့်ဖျက်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
အပေါ်မှာ iPad Mini5ရဲ့ အားသာတယ်ထင်တဲ့အချက်တွေ တဝကြီးပြောပြီးပြီဆိုတော့ အားနည်းချက်တွေဘက် လှည့်ကြတာပေါ့။
-၂၀၂၀ လိုကာလမျိုးမှာ သူ့ Design က အတော် ဒိတ်အောက်ပါတယ်။ (Mini4ကို မပြောင်းလဲပဲ ထုတ်ထားတာဆိုတော့)
-သူ့ 3:2 Ratio Display က Video ကြည့်ရင် Full Screen Experience မရတာလေး Feel အောက်တယ်။ အထူးသဖြင့် 18:9 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ YouTube Video တွေမှာဆို Black Bar တွေက အတော်ထူတယ်။ (ဒါကတော့ ဘယ် iPad Model မဆို ကြုံရမယ့် အားနည်းချက်ပါ။)
-သူ့ Original Charger နဲ့ အားသွင်းရင် သေမတတ်ကြာပါတယ်။ 20-100 ပြည့်ဖို့တောင် ၂နာရီခွဲအထက် အချိန်ပေးရတယ်။ Quick Charge Support တယ်ဆိုပေမယ့် တွေ့ကရာ Charger နဲ့ မရဘူး။ PD Charger (Type C to Lightning) မှ Ok မှာပါ။ Original သာ ဝယ်မယ်ဆို စျေးအတော်မြောက်မှာ။
-သူ့ Dual Speaker က Sound Stage ကောင်းပေမယ့် Tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ အသံတိုးပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်ထဲမှာ ထည့်ထားတာမို့ Surrounding ဖြစ်မှာမဟုတ်။ နားကြပ်ပေါက်် ပါနေသေးတာကတော့ iPad Pro တွေထက် အားသာချက်လို့ ပြောရမှာပေါ့။
-Tablet တွေထုံးစံအတိုင်း Camera က ဝိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် 7MP Selfie Camera က ထင်သလောက် Quality မကောင်းတာကြောင့် အားမရ။
-3GB RAM ဆိုတဲ့ပမာဏက Multi-tasking မှာ စကားပြောပါတယ်။ App ၆ခု ကျော်လာရင် App တွေ Reload ဖြစ်တာသတိထားမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် App ၃ခုလောက်ပြိုင်တူသုံးနိုင်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမပေါ့။
ဆိုတော့ ဒီစျေးဝန််းကျင် iPad တွေမှာ ရွေးတော့မယ်ဆို ဘာတွေတွေးသင့်လဲ?
ခင်ဗျားက iPad ကို Screen ကြီးပြီး စာဖတ်၊ စာရေး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရုံဆို iPad 2019 ကို စဉ်းစားပါ။ Screen လည်း ကြီးရမယ်၊ Performance လည်းကောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ Mini5ထက် ၁သိန်းလောက် ပိုများတဲ့ Air3ကိုရွေးပါ။
Mini5နဲ့ယှဉ်ရင် Screen Size ပိုကြီးမယ်၊ Battery Size ပိုကြီးမယ်၊ Maybe Speaker Size ပိုကြီးမယ်၊ Apple Official Keyboard support ရမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ကိုယ်က ရေရှည်ကိုင်ဖို့ စိတ််ကူးရင် ဒီ ၃ မျိုးကိုကျော်ပြီး Model အဟောင်းတွေကို မစဉ်းစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ Accessory တွေအနေနဲ့တော့ Budget ချွေတာဖို့ဆိုရင် Apple Pencil ကလွဲပြီး ကျန်တာ 3rd Party သုံးစေချင်တယ်။
(Keyboard က မဖြစ်မနေ 3rd party ဝယ်သုံးရမှာပါပဲ။) ကိုယ်တွေတော့ WiFi Version ဝယ်ဖို့ပဲ ပိုတိုက်တွန်းချင်ရဲ့။ Sim Card နဲ့ Internet ထည့်သုံးဖို့လောက်ကို ၁ သိန်းလောက် ပိုပေးရမှာ မတန်ဘူးခံစားရလို့။
ကိုယ်တွေကတော့ Mini5ကို လက်ရှိထွက်ထားသမျှ Apple Product တွေထဲ P2P အကောင်းဆုံးလို့တောင် ယူဆတယ်။ သူဟာ All-in-one ပြည့်စုံနေတဲ့ Device တစ်ခုတော့ ဖြစ်မနေဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့ level ဝန််းကျင်က iPad တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တွေတွေးခဲ့သလို Laptop နဲ့ Smartphone ကြားကလိုအပ်ချက်ကို ရှေ့မှီနောက်မှီ ဖြည့်ဆည့်ပေးနိုင်မယ့် Device ဟာ ဒီစျေးမှာ သူ့အပြင်မရှိနိုင်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့် Tablet တစ်လုံးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကိုင်သုံးချင်သူတွေ၊ Productivity ကို Level တစ်ခုမြင့်မြင့်၊ စျေးတန်တန်သုံးချင်သူတွေ၊ ဂိမ်းရှယ်ဆော့ပစ်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်သူတွေအတွက် ဖုန်းအသစ်လဲမယ့်အစား လက်ထဲကဖုန်းလေးဆက်ကိုင်ရင် iPad Mini5လေးကို တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
iPad Mini5Apple Homepage